हाम्रो सेवा मात्रै होइन, वातावरणले पनि जो कोहीलाई लोभ्याउँछ : रविन्द्र थापा (भिडियो सहित) - Chinari Post
जेष्ठ ४,२०७९ / १० : २२ अपरान्ह / 2022-05-18 10:22 pm
पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले नेपाल विश्वमै उत्कृष्ट स्थानको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित धेरै उद्योग र व्यवसायहरु फस्टाउँदै गएको छ । होटल, रेस्टुरेण्ट, होम स्टे जस्ता खाना र आवाससँग सम्बन्धित व्यवसायी पर्यटकीय क्षेत्रका लागि अनिवार्य मानिन्छ । बाह्य होस वा आन्तरिक, सबैखाले पर्यटकका लागि खाना र वासको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ । यही क्षेत्रमा लागेर नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान दिनेहरु धेरै छन् । तिनैमध्येका हुन्, रविन्द्र थापा । युवा पर्यटन व्यवसायी थापाले काभ्रे जिल्लामा जङ्गल रिसोर्ट संचालन गर्दै आएका छन् । जिल्लाको धुलिखेलमा संचालित थापाको रिसोर्टले के कस्ता सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ? रिसोर्ट संचालन गर्नु कति कठिन छ ? चुनौति र अवसरहरु के कस्ता छन् त भन्ने लगायतका विषयमा उनै थापासँग चिनारीपोस्टका लागि सीता थापासंग गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
पर्यटन व्यवसाय अर्थात रिसोर्ट संचालन गर्ने वातावरण वा प्रेरणा कसरी मिल्यो ?
धेरै तयारी र योजना बनाएर म यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको होइन । अध्ययन सकिएछि के गर्ने भन्ने अन्योल थियो । त्यसैक्रममा साथीहरुसँग छलफल चल्यो । त्यसक्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही काम गर्ने कि भन्ने सोच आयो । छलफल गर्दै जाँदा रिसोर्ट संचालन गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । सानो प्रयासबाट ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ विश्वास लिएको छु ।
पर्यटकीय स्थान धुलिखेलमा तपाईको जङ्गल रिसोर्ट छ । यसलाई कसरी सन्चालन गरिरहनुभएको छ ?
हामीले अहिले जङ्गल रिसोर्ट धुलिखेल र धुलिखेल एडभेन्चर गरेर दुई वटा होटल सन्चालन गरिरहेका छौँ । पर्यटन व्यवसायमा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीले दुई वर्षअघि सुरु गरेका हौँ । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउने क्रम जारी नै छ । रिसोर्टलाई आकर्षित र ग्राहकमुखी बनाउनका लागि अझै धेरै काम गर्ने योजना छ ।
रिसोर्टहरु धेरै छन् । प्रतिस्पर्धी बजार छ । धुलिखेलमा संचालन गर्न कतिको सहज छ ?
हो, अहिले यो क्षेत्रको बजार एकदमै प्रतिस्पर्धात्मक छ । तर धुलिखेल आँफैमा पर्यटकीय नगरी भएकाले अहिलेसम्म ठूलो कठिनाई भोग्नुपरेको छैन । स्थानीय निकाय, प्रशासन, सुरक्षा निकाय लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरुले पनि धुलिखेललाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । त्यसैले पनि हामीलाई सहज भएको छ ।
एउटा रिसोर्ट संचालन गर्नका लागि केके पूर्व तयारीको आवश्यकता पर्ने रहेछ ?
पक्कै पनि, मेरो लागि यो क्षेत्र नयाँ थियो । त्यसैले सुरुवाती दिनमा धेरै कुरामा सचेत हुनुपथ्र्यो । रिसोर्ट संचालनका लागि विभिन्न प्रकारका अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो । पैसा लगानी गरेर मात्रै कुनै पनि व्यवसायी सफल हुँदैन । आफूले गर्ने व्यवसायको विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । सम्भावना र चुनौतिलाई राम्रोसँग अध्यनन गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धी बजारमा आफू कसरी फरक हुने ? ग्राहकलाई कसरी सन्तुष्ट बनाउने भन्ने कुराहरु धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
जङ्गल रिसोर्ट धुलिखेलमा आउने पर्यटकहरुको विशेषता र उनीहरुले दिने प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
यहाँ अधिकांश स्वदेशी पर्यटक नै आउँछन् । हाम्रो धुलिखेल एड्भेन्चर क्याम्पमा चाँही विदेशी पाहुना धेरै आउँछन् । तर स्वदेशी होस् वा विदेशी, दुवैखाले पर्यटकलाई एउटै किसिमको सेवा दिइरहेका छौँ । अर्थात भेदभाव गर्दैनौँ । यो ठाउँ नै रमणीय भएकाले उनीहरु खुशी हुन्छन् । हामीले दिएको सेवाबाट पनि सन्तुष्ट नै छन् । सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु त छदैछ । तर नराम्रो प्रतिक्रिया आएको छैन ।
तपाईको रिसोर्टमा पाइने खाने परिकारका विशेषता कस्ता कस्ता छन् ?
हामीले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । ताजा र स्वस्थ खानेकुराका लागि आफ्नै बारिमा तरकारी तथा फलफूलहरु उत्पादन गरेका छाँै । त्यसैगरी स्थानिय स्तरमा उत्पादित दुध, दही, घिउ, माछा, मासु ग्राहकलाई खुवाउँछौँ । सागपात पनि अर्गानिक नै हुने गर्छ ।
सेवाग्राहीका लागि थप जानकारी वा सन्देश केही छ भने भन्नुस ।
हाम्रो यो रिसोर्ट वातावरणीय हिसाबले उत्कृष्ठ स्थानमा छ । मानिसहरु केही उचाई अनि स्वस्थ वातावरण भएको ठाउँ मन पराउँछन् । यसैलाई मध्येनजर गरेर हामीले रमणीय स्थानमा रिसोर्ट संचालन गरेका हौँ । पाहुनाको लागि २४ घण्टा नै खुल्ला राखेका छौँ । अहिले एक रातमा ५० जनासम्म बस्ने ब्यवस्था छ । यसलाई ६ महिनाभित्र एक सय पु¥याउने योजना बनाएका छौँ । कार्यक्रम गर्नका लागि दुई सय जना अट्ने सभाहल छ । त्यस्तै क्याम्प फायरिङ्ग र वारविक्यूले यहाँ आउने पाहुनालाई छुट्टै मनोरञ्जन प्रदान गर्छ । १ हजार सम्मलाई पुरै क्याटरिङ्ग सर्भिस सहित पिकनिकको व्यवस्था पनि छ । जङ्गल रिसोर्टबाट करीब दर्जन बढी हिमशिखरहरु साथै सुर्योदय र सुर्यास्तको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ ।
मलाई चाँही नौलो अनुभब खासै केही लागेको छैन् । किन कि म २४ घन्टा एउटै ...